/Blog/Ithala/Indlela yokukhetha i-Steroids i-Powder Suppliers kwi-12 Steps
ezaposwa ngomhla 04 / 23 / 2019 by UDkt Patrick Young bha liweyo Ithala.
Into eninzi ngeSteroids Powder
I-1.I-introduction kwi-steroids abaphakeli bee powder
2. Indlela yokukhetha umthengisi we-steroid powder kwiimpawu ze-11
Inyathelo 1: Ukuchonga uluhlu lwababoneleli abanokukwazi ukufumana i-steroids powder
Inyathelo 2: Ukuphicothwa komsebenzi wokubonelela kwababoneleli
Isinyathelo 3: Khangela ulwazi oluthe xaxa malunga nomthengisi we-steroid powder ngokubuza imibuzo okanye ukwenza uphando lwemibuzo yokuzihlola
Inyathelo 4: Uphando malunga nokuba umthengisi we-steroid powder uyingcali
Inyathelo 5: Hlola ukuphendula kweqela leenkonzo zokunakekela amakhasimende
Inyathelo 6: Khangela izibuyekezo, ubungqina kunye nembuyekezo yabathengi kwi-intanethi
Inyathelo 7: Thelekisa amaxabiso e-steroid powders
Inyathelo 8: inkxaso yenkxaso
Isinyathelo 9: Indlela yokuhambisa kunye nephakheji
Inyathelo 10: Inombolo yokulandelela
Inyathelo 11: Indlela yokuhlawula
Inyathelo 12: Hlola ezinye iinkcukacha zenkampani
Ii-ntroduction kwi-steroids abaphakeli bee powder
Steroids abaphakeli beepoda ngabavelisi okanye ababoneleli abathengisa iintlobo ezahlukeneyo ze-steroid powder kuwe kuquka umlomo, injectables nazo zonke ezinye iifom, oko kukuthi, iPhepha okanye i-sachets. Kukho amawaka eenkampani zonyango kunye namabhabhi angaphantsi komhlaba esitokisini kwaye athengise i-steroid powder online.
Akunombuzo ukuba namhlanje abaninzi abantu basebenzisa i-steroids kunanini ngaphambili. Akumangalisi ukuba abathengi abaninzi be-steroid bafuna ukuwanika ukuba bahambelane neemfuno eziphezulu. Ngaphambili, ukhetho olulodwa aluzange lube ngumsebenzi ngenxa yokuba bekungabininzi kodwa namhlanje kufuneka uqaphele xa ukhetha enye.
Umthengisi we-steroid powder oyikhethayo unempembelelo ngqo ukuba ngaba awuyi kufezekisa iinjongo ozibekileyo. Ukhetha umthengisi ongeyiphutha, kwaye unokuphelisa ukuchitha imali eninzi kunye nexesha.
Ndiya kuthi ukukhetha umthengi ofanelekileyo kuyinxalenye ebalulekileyo ukuba uceba ukuthenga i-steroids. Kungenxa yokuba kuqinisekisa ukuba umthengi oyikhethayo unokunikela ngexesha, ngokuhambelana nomgangatho wakho ophezulu wekhwalithi kwaye kubaluleke kakhulu kwixabiso elifanelekileyo.
Indlela yokukhetha umthengisi we-steroid powder kwiimpawu ze-12
Enyanisweni, ukhetho olufanelekileyo lwe-steroids umthengisi we-powder lixesha elide kwaye lincinci. Abantu abaninzi bayeka ngaphambi kokuba bafunde ubugcisa baze bafikelele ekuhlaleni. Namhlanje, siya kuthungela kwiinqununu eziphambili kunye nezixhobo ezisetyenziselwa ukuchonga abathengisi abasemgangathweni, ziqhathanise kunye kwaye ekugqibeleni ukhethe umthengi ongcono kakhulu onokumthembayo. Makhe siqalise!
Inyathelo 1: Ukuchonga uluhlu lwabathengi abanokukwazi ukufumana i-steroids powder
Isinyathelo sokuqala sibeka phantsi uluhlu lwabaxhasi be-steroids. Ukwazi njani ababoneleli abafanelekileyo? Kukho imithombo emininzi yokufumana ababoneleli kwintsimi ye-steroids. Ngokomzekelo, kukho abachaphazelekayo abahlukeneyo ongayifumana uluvo lokubandakanya;
Abavelisi- Ungabiza abenzi be-steroid obaziyo kwaye ubacele ukuba bakuthumelele uluhlu lweenkampani ongaqhagamshelana nazo. Ngenxa yoko, kuya kukunceda ekufumaneni into engcono kakhulu ongayenza ngayo ishishini.
Imiboniso- Le yindawo elula kunazo zonke onokufumana uluhlu lwabaphakeli kuba kukho inani elikhulu kwindawo efanayo. Ngaphambi kokuba uvakashele umboniso, qiniseka ukuba ukhangele uluhlu lwababonisi abaya kuqiniseka ukuba kukho abo bawela kwiimfuno zakho.
Abacebisi bezorhwebo- Mhlawumbi ufikelele kwimibutho kazwelonke okanye yangaphandle exhasa amashishini. Umzekelo wolu hlobo ngamagumbi oshishino.
U shishino lo shishino- Ngokuqhelekileyo, amaphephancwadi amashishini anika isikhala sabathengisi bentengiso. Ngombulelo, kukho iindawo ezizodwa kwimisebenzi ethile ukuze ungayi kukhangela uludwe lwabashicileli be-steroid kumagazini wokwakha.
Uphando- Le ndawo yindawo apho unokufumana ababoneleli ngokusekelwe kwiimfuno zakho ezifana nemveliso ethile, kunye nezinye ezininzi. Ukuba uyazi i-steroid eyiyo oyifunayo, unokukhangela "ababoneleli nge-steroid x."
Kule nto, unokuba ngumfanekiso weefayile uze uze uluhlu olufutshane. Kufuneka uhlole ukuba yeyiphi na into ekufanele ihlolisise ngayo ubunzulu kwaye ibhasele ibhokisi eninzi ngokwemiqathango yakho. Ngomntu ngamnye ekujongeni bonke abanikezeli abanokuthi uya kumangaliswa kwiindlela ezimbalwa ozikhethileyo.
Oku kuya kunceda njani ekufumaneni umthengisi ofanelekileyo? Kunceda ukunciphisa ukhuphiswano, kwaye ngoku unethuba eliphezulu lokukhetha umthengisi ophezulu we-steroids. Kwakhona, ukwenza isigqibo sokugqibela singadingi umzamo omkhulu ngoku.
Uphicotho-zincwadi lubandakanya ukulinganisa nokuhlalutya ukusebenza komthengisi ngexesha kwi-bid yokubona umgangatho nokunciphisa nayiphi na ingozi. Ngokwenza oku, unokukhetha abo baye bagcina iinkonzo ezigqwesileyo kunye nokuphelisa abo abangenzi.
Ukongezelela, unokuqinisekisa ukuba umboneleli onokuthi akanakho ukuphazamiseka kwenkqubo echaphazela umgangatho weemveliso. Kananjalo kunokukunceda ekuqondeni amandla omthengisi ngamnye kunye nobuthathaka ngaphambi kokuba anqume ukuba ngubani onokuzilungisa.
Ukuphicothwa komsebenzi wabathengi akuyeki emva kokusayina isivumelwano; kubalulekile ekuphuhliseni ishishini. Ngaloo ndlela kukuvumela ukuba ugxininise ngakumbi kubanikezeli abaphambili be-powder ocinga ukuba banobungozi obuphezulu xa bebekwa esweni nabathengisi be-second-tier. Umthengisi oye wenza umsebenzi oqinileyo unokukunikezela ngokubhekiselele kunye nenzuzo kwi shishini lakho. Abo bafumene umgangatho ombi bangaqukumbela kukunika intloko.
Unokuba ufuna ukufumana iinkcukacha ezingaphezulu kubathengi abaza kuba malunga nolwazi oluthe ngqo. Kule meko, unokwenza i-questionnaire yokuzihlola apho abaphakeli banokuphendula nayiphi na imibuzo enokuba nayo. Ngalokhu, unokwazi ukuchonga izikhalazo zokusebenza kunye nokufunda indlela umthengisi aqonda ngayo ukusebenza kwayo.
Unokukhetha ukubandakanya zombini imibuzo evulekile nevulekile ukuze ababoneleli bakwazi ukukuchazela indlela abasebenza ngayo kwiindawo ezahlukeneyo. Oku kuya kunceda ukunyaniseka kuba akudingeki baphendule ewe kuyo yonke imibuzo.
Inyathelo 4: Uphando malunga nokuba yintoni i-steroids umthengisi we-powder ngokukodwa.
Akunabo bonke abathengi i-jack yazo zonke iintengiso. Abanye banika i-steroid eluhlaza ngelixa abanye baxhomekeke ekugqibeleni. Abanye banokubonelela nge-steroid ethile xa abanye bengenako. Kungabonakala kucacile, kodwa yintoni ekufuneka uyenze ingqwalasela ukwazi kuqala iimfuno zakho. Kufuneka ufumane ethile xa ufumanisa oko ufuna ukuthenga.
Ngoku unokwenza uphando malunga nawuphi na umthengisi onokuhlangabezana neemfuno zakho ngokwaneleyo. Ngokomzekelo, ngenxa yokuba umthengisi uthengisa i-Deca ayithethi ukuba banokukunikezela Deca powder eluhlaza.
Ukuba unemiveliso emininzi, unokukhetha ukufumana ababoneleli abaninzi abanokukunika zonke ii-steroids ozifunayo.
Inyathelo 5: Hlola ukuphendula kweqela leenkonzo zokunakekela amakhasimende.
Inkonzo yabathengi ihluke kumthengisi omnye komnye, kodwa iimpawu ezibalulekileyo ziquka ukuphendula kuzo zonke iimbuzo, ukunikela izicombululo kwiingxaki, ukunikela impendulo ngokukhawuleza kunye nokufumana umthengi onokufumaneka.
Ukuvavanya inkonzo yabathengi ababonelela ngempahla kubalulekile. Ingaphezulu yeoli kwinjinjini. Xa ikhona, injini iya kuhamba ngokufanelekileyo ngenkqubela unokuba nolwazi olungathandekiyo ngaphandle kwalo. Ukuba umthengisi unempendulo yokukhathazeka, ngoko-ke akayiyo into ebalulekileyo malunga nokushishina kwakhe kunye nokusebenzisana naye kungabi lula.
Xa uvakalelwa kukuba uya kufuneka udibanise nabo kwiiyure zeeyure uze ubeke oku kuqwalaselwa. Yiya kumboneleli weqela lokunakekelwa kwamakhasimende athatha ixesha elide ukuphendula kwaye ngubani okhoyo 24 / 7. Ngale ndlela uya kuhlala uhlala kwiphepha elifanayo ngokwemfuno zezoshishino zakho. Ngokujongana neenkxalabo zakho nokukwazisa okufunekayo kuwe; Ubambiswano obunempumelelo buyakhiwa.
Ukongezelela, ukuba inkampani inokunakekelwa kwabathengi abathembekileyo, ngokukhawuleza, nangokukhawuleza, kukho amathuba aphezulu ukuba inkampani inomthetho. Ukuba uvakalelwa njengezakhono zenkonzo zabathengi abathile, ziqhubela phambili kwijaji elilandelayo kunye nejaji ngendlela abaphatha ngayo njengomthengi.
Inyathelo 6: Khangela izibuyekezo, ubungqina kunye nembuyekezo yabathengi kwi-intanethi.
Ukuhlolisisa idumela labathengisi abahlukeneyo lelinye lamanyathelo afanelekileyo ayenokuzisola emva kokuqhekeka. Kufezekiswa ngokuhamba ngempendulo yabathengi enikwe kwi-intanethi. Umbono womthengi ukuxelela ukuba unelisekile ngenkonzo okanye cha.
Ukuphonononga ukufunwa kunye nobubungqina ngokuphathelele iinkonzo zomthengisi kuya kukunceda ufumane ukuqonda okucacileyo malunga noko ukulindele ukuba unqume ukutshintshana nabo. Unokukwazi nokuba lixesha elingakanani elithathayo ukuhambisa ii-steroids kwaye ukuba zibonelela ngeenkonzo ezihamba phambili emva kokuthengisa.
Inkampani enegama eliqinileyo linakho ukufumana iimveliso eziphezulu kunye nezakhono malunga nendlela yokuphatha abaxhasi babo. Ukongezelela, ukuba kukho ezininzi iimpendulo ezingalunganga kunye nezikhalazo, ke le nkampani ayilunganga. Iimbalwa ezimbalwa ezimbi azikho okubi; oko kufuneka uhlolisise indlela umthengisi abhekise ngayo umba ophakanyisiweyo.
Xa kuziwa kwixabiso, owona mzantsi kunokuba yinto ephambili yakho. Nangona kunjalo, iinjongo zakho eziphambili kukufumana iimveliso eziphezulu zeemveliso ezinobungakanani obufanelekileyo kunye ne-steroids ezingancinci ezingenakunikela nayiphi na inzuzo. Intengo ehlekisayo ingaba isingqungquthela ukuba inkampani ingaba khona apho ukuba ikukhohlise.
Ukuba unesiqinisekiso sokuba i-steroids yomgangatho ophezulu kwaye iindleko zincinci ngaphezu kwezinto ezincinci onokuzifumana, qhubela phambili kwaye uthenge xa ​​kunokwenzeka. Ixabiso akufanele liphakame kakhulu; kufuneka kulungele uhlahlo lwabiwo-mali.
Ngaba ucinga ukuba amaxwebhu emigangatho yemigangatho anokuchaphazela ulwalamano lwakho nomthengisi? Umgaqo oyintloko ukuba nayiphi na umthengi kufuneka agcine iirekhodi ezifanelekileyo kunye kunye nokukhusela wena kunye neyeshishini lakho. Ukuhlola ukuba ngaba umthengisi unemvume efanelekileyo kukunceda ukuba usebenza nombane osebenza ngokusemthethweni.
Ngaphezu koko, kunceda ukwakha umfanekiso ocacileyo wendlela umthengisi asebenza ngayo. Ingqiqo enhle ukucela ababoneleli abanokuba ngabathengi iingxelo zovavanyo lwebhu, njenge-HPLC, i-NMR, i-COA (iSatifikethi soHlololiso), kunye neziqinisekiso ezifana ne-GMP (i-Good Manufacturing Practices). La maxwebhu anceda ukwazi ukuba ii-steroids ezivelisiweyo zenziwe kwaye zilawulwa kwimigangatho yemigangatho.
Ngamanye amaxesha unganakho ixesha lokuhamba kwifemu ukuqinisekisa ubungakanani bokuveliswa komthengisi othile. Ukuba kunjalo, ungabacela ukuba bakuthumelele ikopi yeziqinisekiso zabo. Ukuba nobungqina obucacileyo bokuthi umthengisi uhambelana nomthetho uyimpawu ebalulekileyo yomthengisi obalaseleyo.
Indlela inqaku lakho lipakishwe ngayo, kwaye indlela yokunikezela inquma ukuba uyifumana kwenye into. Ukufumana iimveliso eziphosakeleyo ezifuna ukutshintshwa kwazo zonke iimeko zingaphatha ixesha kwaye zidla ixesha. Kulungile ukuphawula ukuba unokwethenjelwa kwaye ngexesha lokuthunyelwa lihamba ngendlela ende ekukhuthazeni impumelelo yakho yezoshishino.
Ngaphambi kokukhetha umthengisi we-steroid powder, kufuneka ukhangele ingqwalasela kunye nokugcina ixesha ngokwemihla yokuhambisa. Umthengi ofanelekileyo uya kuthatha iiyure ezingaphantsi kwama-24 ukuthumela ipakethe yakho kwaye uqinisekise ukuba ufika kwindawo oya kuyo ngexesha elifutshane kunokwenzeka.
Ukuba nomthengisi we-steroids othembekileyo uya kukuvumela ukuba ulawulwe i-stock yakho kwaye ubeke ilindelo kubaxumi bakho malunga nokunikezelwa kunye namaxesha okulinda.
Umthengisi wakho ofanelekileyo we-steroid akanakuphumelela umklomelo ekunikezeni i-packaging enhle kakhulu yokupakisha, kodwa kufuneka ibe namandla ngokwaneleyo ukukhusela izinto kunoma yimuphi umonakalo.
Abanye abathengi basebenzise ukuthunyelwa kweendleko zamahhala ngelixa abanye bahlawula ngokobukhulu, umgama wokuhamba kunye nesisindo. Fumana yonke ingcaciso efunekayo malunga nokuba ingaba nexabiso elingakanani ukuze ugweme iindleko ezifihliweyo.
Inombolo yokulandelela ikhowudi enikezelweyo xa uwenza umyalelo ukuvumela ukuba ulandele iphakheji yakho kwi-intanethi ukususela ngexesha eliye lathunyelwa ngalo xa lifika kwidilesi yakho yokuthumela. Kwakhona, unokwazi ukujonga ulwazi lwenkampani yenethiwekhi kunye nezinto ezikhoyo ngoku.
Umthengisi onikunikezela ngolwazi lokulandelela unika ithemba lokuba ipakethe iya kufinyelela kuwe. Abanye baya ekuthumeleleni iipakethe zepakethe ngaphambi kokuziswa. Kwakhona kukukhusela ekulahlekelweni xa ungayifumani ngenxa yokulahleka okanye umonakalo. Ukutshintshana nomthengisi kuncedisa ukuba ube nolwazi olungcono lokuthenga jikelele.
Kubalulekile ukuba uqwalasele iindlela zokuhlawula umboneleli wakho oza kukunikela. Indlela yokuhlawula enikezelweyo kufuneka inokuthenjwa kwaye ifumaneke kwindawo yakho.
Namhlanje, i-bitcoin kunye neemali zedijithali zithandwa kakhulu. Ziza ngeenzuzo ezininzi kuba zivumela ukuba uhlawule ngokungaziwa. Ekubeni bengabhalanga ngokuzenzekelayo ukuthengiselana, ufumana uncedo lobungasese.
Ezinye iindlela zokuhlawula ezifana nemali zibeka umngcipheko ngakumbi kunabanye ngelixa abanye bathatha ixesha elingakumbi lokuhlaziywa. Oku kunokuchaphazela ishishini lakho xa ufuna ukuhanjiswa kweemveliso ngosuku olufanayo. Nguxanduva lomthengisi ukunika iinketho zokuhlawula ezinomngcipheko omncinci wokuhlawula kunye nokukhwabanisa kwedatha.
Ukongezelela, abanye abafana namakhadi-mboleko bahlawula iifizi zenkonzo. Unokukhetha iindlela zokuhlawula ezineendleko zokuthengisa ezimbalwa. Kungenxa yezizathu ezinje ukuba kufuneka ukhethe umthengisi onika indlela yokuhlawula efanelekileyo.
Qinisekisa ukuba uhlawula umthengisi onika iinketho ezahlukeneyo zokuhlawula njengeNtshona Union, MoneyGram, Bitcoin, ukudluliselwa kweBhanki, njl ukuvumela ukuba ukhethe oko kukusebenza kona.
Ikhasi lasekhaya lomthengisi linolwazi oluxabisekileyo olunokusetyenziswa ukuze wenze isigqibo sokugqibela. Isitatimende esisemthethweni asinanto yokufihla kwaye mhlawumbi siya kukunika ulwazi oluninzi malunga ngathi iphepha. Khangela inani labasebenzi abaqeshweyo, ubukhulu befektri kunye nenani lotyalo-mali olwenziweyo.
Umthengisi oyinyaniso usoloko uthetha ngolwazi. Yiyo iflegi ebomvu emele ikumise ngaphambi kokuthatha isigqibo sokubetha iqhosha lokuthenga.
Nangona inkqubo yokukhetha umthengisi we-steroids ingabonakala ide, ukulandela amanyathelo okulula kunokukugcina ixesha. Ukuthatha iifutshane okanye ukunciphisa kungakubiza kakhulu ngokwemigangatho yolawulo lweentlanganiso, ukwakha idumela elinamandla kwi-steroids esemgangathweni kunye nokwandisa imfuno yabathengi.
Ukungahoywa kwelinye inqanaba lokuvavanya lingakunikela ukuba ulungiselele umthengisi ophantsi. Ngaloo ndlela, kunokwenzeka ukuba kubekho ukulungelelanisa ukulungelelanisa, iimveliso ezinobulunga obuphantsi, iimpapasho ezikhawulezayo, ukuphazanyiswa kokubonelela, ukukhubazeka, njl njl. Injongo zoshishino ziyafezekiswa xa iqela lakho lokubonelela ligxile kwimicimbi esemgangathweni, ixabiso, kunye neshedyuli yokubonelela. Akuyi kuqinisekisa kuphela ukuba kusinda kweshishini kodwa kunika nabasebenzisi bokugqibela ukuba banokuzithemba ngakumbi kwi-steroids enithengisayo.
Ukukhetha umthengi ofanelekileyo, kuya kunika ithuba lokuthenga uncedo lokungaxinzeleleki uxinzelelo kwaye kukunceda ukuba uthole i-steroids engcono kakhulu.
Ukukhethwa koMthengisi, Ukuthengwa kweentlepheko, i-PT Publications, i-1998, iphepha 1-154
I-HR: -Usebenzisa ii-intranethi ukuphucula ukuphumelela kwabantu bakho, iphepha 185
Imiba yabathengi, uDkt. Aditva Verma
I-Raw Proviron (iMesterolone) ekwakheni umzimba, umyinge, kunye nomjikelezo
Izinto ze-10 ozimele wazi ngaphambi kokuba uthathe i-DMAA
I-Boldenone Undecylenate: I-8 I-Outoid Effects Effects Uya Kufuna Ukuyiphepha 2019 Indlela yokwenza i-testosterone enanthate homebrew kwiimpawu ze-6